सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप ३४ जना चिकित्सक पठाइयाे – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख ५ गते १६:५५
कोरोना भाइरसको आशंकामा हालसम्म २४ हजारको २ सय ५३ नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पीसीआर विधिबाट ७ हजार ६ सय ८८ र र्यापिष्ट टेष्टबाट १६ हजार ५ सय ६५ नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए ।
गत २४ घन्टाको अवधिमा ४ हजार ८ सय २२ नमुना परीक्षण भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार र्यापिष्ट टेष्टबाट परीक्षण हुन बाँकी सोलुखुम्बु र डोल्पा जिल्ला रहेका छन् । शुक्रबार ४ हजार ६ सय ७ जना क्वारेन्टाइनमा र ९० जना आइसोलेसनमा रहेको छन् ।
प्रवक्ता डा. देवकोटाको अनुसार २ सय ९१ जना रेड जानेनमा रहेका छन् । देशभर हालसम्म पीसीआरबाट परीक्षण हुने १४ संख्या पुगेको छ । पाटन अस्पतालमा पीसीआरबाट परीक्षण गर्ने मेसिन जडान भएको र छिट्टै नै परीक्षण हुने उनले जानकारी दिए ।
र्यापिष्ट टेष्टको लागि गत हप्ता प्रत्येक प्रदेशलाई ५ हजारको दरले किट वितरण गरेको थियो । आवश्यकता अनुसार थप सबै प्रदेशलाई ३० हजार किट वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा एमडी–एमएस अध्यनरत ३४ चिकित्सकलाई कोरोना उपचारको लागि सुदुरपश्चिम प्रदेश खटाएको छ । थप जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरी १ महिनाको अवधिको लागि खटाइएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए ।
‘हालसम्म र्यापिष्ट टेष्टबाट पोजेटिभ देखिएको केसहरु पीसीआरबाट परीक्षण गर्दा नगेटिभ आएको र केहि नमुना परीक्षणको क्रममा रहेका छन्, डा. देवकोटाले भने,‘ गत ७२ घण्टा सम्म पोजेटिभ केस देखा परको छैन ।’ हालसम्म संक्रमितको संख्या १६ पुगेको छ ।
मेडिकल काउन्सिल मतपरिणाम : डा. पौडेलले लिए अग्रता , कसको कति मत?
सरकारले ‘ओमिक्रोन’ फैलिन नदिन निगरानी बढायो, सीसीएमसी बैठक बस्दै